Mandria any Thailand " Journey-Assist - Fety tany Thailand. Izay mahasoa rehetra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд
Mifanena amin'i Thailand! Firenena arivo tsiky!
Fanjakan'i Thailand - firenena iray ao amin'ny nosy Indochina any atsimo atsinanana Asia... Tena malaza eo amin'ireo mpizahatany eran'izao tontolo izao! Tempoly mahafinaritra sy toerana masina, tsara tarehy tora-pasikany be voajanahary sy vitan'olombelona. Toetrandro tropikaly ary ny mponina tsara toetra tsy hamela olona tsy tezitra.
Thailand dia antsoina koa hoe "Land of the Free". Ary tsy mitombina velively izany, satria i Thailand no firenena tokana ao Azia atsimo atsinanana izay tsy zanatany, izay tena reharehan'ny vahoaka Thai.
Ny anarana iray hafa ho an'i Thailand dia ny "Land of a Thousand Smiles", satria sarotra ny mahita olona sariaka kokoa eto amin'izao tontolo izao. Filozofa any Thailand miavaka amin'ny karazany. Dia nozairina kofehy mena miaraka amin'ny lohahevitra hoe: "Miaina amin'ny fahafinaretana." (bebe kokoa ao amin'ny fizarana kolontsaina sy fomba amam-panao Thai)
Misy fampahalalana fanampiny momba an'i Thailand azo alaina amin'ireto rohy ireto:
Kolontsaina Thai sy filozofia
Toetany, vanim-potoana, toetr'andro any Thailandy
Ny sary feno momba ny voankazo any Thailand
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Thailand. Inona ny vola raisinao. Mpanova Vola
Fifamoivoizana any Thailand
Ny fijerin'ny seranam-piaramanidina Thailand
Fanafody any Thailandy. Toeram-pitsaboana, fanafody
Finday, Internet any Thailand
UPD. 19.12. 2020
Noho ny toe-javatra epidemiolojika (pandemiolojika) eto amin'izao tontolo izao, Thailand, mitovy amin'ny firenena hafa any Azia atsimo atsinanana, ny 26 martsa 2020. nanidy ny sisintaniny ho an'ny fifamoivoizan'ny mpizahatany iraisam-pirenena. Nanomboka teo ary mandraka ankehitriny, mihidy ny sisin-tany ho an'ny fizahantany.
Azonao atao ny mahafantatra bebe kokoa momba ny fotoana hiandrasana ny fisokafan'ny sisintany sy ny toetrany ho an'ireo any Thailand ankehitriny: https://thailandgid.ru/osobennosti/kogda-tajland-otkryvaet-granicy.html
Mahaliana any Thailand (Fampahalalana)
Thailand ... firenena mahaliana 🙂
Miaraka amin'ny toerana mahaliana sy mahafinaritra maro dia vitsy ny firenena afaka hirehareha.
Ohatra, ao an-drenivohitr'i Thailand - Bangkok, azonao atao ny mankafy ny Royal Palace mirehitra sy ireo tempolin'ny tranon'ny Emerald Buddha sy Wat Pho, izay voaravaka sarivongana am-boalohany maro loko sy haingo maivana. Ireo izay tsy matahotra haavo dia afaka mijery ny mahavariana ny tanànan'ny tanàna amin'ny alina: Bangkok, mamirapiratra amin'ny jiro, dia azo gaga avy amin'ny lampihazo eo amin'ny rihana faha-84 amin'ny Hotely Baiyoke Sky.
Faritra lehibe iray hafa amin'ity firenena ity ny nosy Phukettoerana tokony hijerena ilay valan-javaboaryPhuket Fantasy". Afaka henonao sy jerena ny tantaran'i Thailandy: trano, tempoly, lapa avy amin'ny vanim-potoana rehetra misy ny tantaran'ny firenena no angonina ao amin'ny valan-javaboary. Misy ihany koa ny fialamboly voalohany toy ny elefanta, voay ary fampisehoana bibidia hafa mahatalanjona. SY tora-pasika amin'ity faritra misy tanindrazana ity dia mahagaga ihany!
Ny fahafantarana an'i Thailand dia tsy ho feno raha tsy misy mahandro sakafo eo an-toerana. Ny mpahandro Thai dia manavaka amin'ny fiheverana mandray andraikitra, mitandrina amin'ny fomba fahandro sy amin'ny safidin'ny vokatra, ka tsy manahy momba ny tsiro sy ny endrika manintona amin'ny lovia ianao. Tamin'ny taona 2017, trano fisakafoanana 17 any Bangkok irery no nahazo kintana Michelin! Ny sakafo an-dalambe dia azo antsoina hoe manintona manokana amin'ity firenena ity: tany am-boalohany, nahafa-po ary matsiro be.
Tokony ho fantatr'ireo izay mandeha any Thailandy endri-javatra amin'ny toetr'andro eo an-toerana. (jereo ny antsipirihany ao fizarana manokana). Tropikaly izy io manerana ny firenena, fa ny velarantanin'i Thailand dia somary midadasika, noho izany ny toetr'andro dia mety ho samy hafa be amin'ny faritra samihafa.
Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny volana novambra ka hatramin'ny martsa. Ny zava-misy dia ny aprily-novambra any Thailand no fotoanan'ny orana, na dia mivoaka amin'ny fomba samihafa aza izy io any amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena: indraindray ny dia iray izay tonga tamin'ny fotoana iray dia sahirana mihaona amin'ny orana.
Saingy tsy maintsy manome voninahitra ny toe-tany eto an-toerana isika, ny orana eto dia tsy mitovy velively amin'ny latitude afovoany. Mafana izy ireo, fohy ny andro, ary amin'ny alina ny ankamaroany.
Amin'ny lohataona, tsy azo ihodivirana ny hahatongavany any afovoany sy avaratra atsinanan'i Thailand, satria mandritra ny vanim-potoana toy izany dia misy hafanana mahery: miakatra hatrany amin'ny 40 ny mari-pana, indraindray mirehitra ny ala, tsofina mahatsapa any amin'ny tanànany, ary izay sarotra aza ny miaina.
Nanomboka ny volana novambra ka hatramin'ny febroary, teo afovoany sy atsimon'i Thailand, ny mari-pana saika tsy nitsahatra ambanin'ny andro ambany +25, fa any amin'ny faritra avaratry ny firenena dia mangatsiaka kokoa. Eto amin'ny alina indraindray dia mihena ho an'ny +10 ny mari-pana indraindray, noho izany dia tokony mitafy akanjo mafana ianao.
Inona no andrasana 🙂
Raha ny momba ny fitondrantena, eto amin'ity firenena ity ny fihetsika mahery sy fihetsika mahery setra eny amin'ny toerana natao ho an'ny besinimaro dia heverina ho ratsy toetra. Tena tsy ankasitrahana ao Thailand, ary fanehoam-pitiavana tafahoatra manoloana ny olon-tsy fantatra. Amin'ny ankapobeny, ny vahoaka Thai dia manavaka amin'ny hoe tony sy sakanana. Tsy eken'izy ireo ny fihoaram-pefy sy ny fahafaham-po, noho izany, na dia ao anatin'ny toe-javatra mifanenjika aza dia tsara kokoa ny mitazona feo na dia.
Fanakalozam-bola ho an'ny vola eo an-toerana - baht, tokony hotanterahina manokana any amin'ny sampana banky sy amin'ireo fifanakalozana amin'ny fomba ofisialy voamarika misy marika EXCHANGE. Tsy mijanona ny banky. Ary koa, any amin'ny hotely maro, ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny fifanakalozana dia azo atao, fa eo kosa ny tahan'ny tsy dia mahomby.
Fifamoivoizana any Thailand ny sisa. Ny endrika malaza amin'ny fitaterana manokana dia ny môtô. ny hofan-trano ihany koa fanofa fiara dia manolotra orinasa be dia be orinasa. Fitateram-bahoaka vonona foana amin'ny fanatontosana ny asany 🙂
Azonao atao ny mahazo fampahalalana bebe kokoa momba izany rehetra izany ao amin'ny faritra misy ny vavahadin-tserasera! 😉
Ny zava-dehibe tokony ho takarina ankehitriny dia ny firenena Thailand izay tena mila mahafantatra bebe kokoa ianao! 🙂
Café amoron-dranomasina "Kebidges & Condoms"
Mini Siam Miniature Park
Phuket Aquarium Aquarium phuket
Akademia Phuket vaovao "Aquaria"
Tena mendrika ny fijerena akaiky an'i Thailand!
Ananany izay rehetra ilainao ho fitsaharana tsara.
Ny zanako vavy 3L dia manontany foana hoe rahoviana izahay no handeha any - eo amin'ny seza amin'ny solosaina dia misy sarin'ny filentehan'ny masoandro Thai)